It is me. Ko Niknayman.: February 2008
နအဖရဲ့ ပြည်သူ့ ဆန္ဒခံယူပွဲတဲ့လား။ လုံးဝအရှင်းဆန့် ကျင်ကြ (၂)။
Posted by Ko Niknayman at 7:05 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 6:11 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 3:02 PM Links to this post
နအဖရဲ့ဒီနေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာကတော့ ဒီလို ပြောထားပါတယ်။
ပြီးတော့ မီးသတင်းနဲ့ ကပ်ရက်လေးအောက်နားလေးမှာတော့ ဒီလိုလေးသတိပေးထားပါတယ်။
ဒီလိုသတိပေးရုံလောက်လေးနဲ့တာဝန်ကျေနေပြီလို့နအဖကထင်နေပါတယ်။
Posted by Ko Niknayman at 2:22 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 6:55 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 5:26 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 4:09 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 2:32 PM Links to this post